Italiana toetra milaza
Mey 10, 2013 amin'ny 5:37 am
Efa ampy ny efajoro hoe "mamela hanatsarana ny Full Version" ao amin'ny toe-javatra, nefa tsy afaka mahita izay Jereo ny upgrades sy hanatanteraka ny upgrade,
Afaka azafady hazavaina
Mey 10, 2013 amin'ny 7:22 am
Ao amin'ny WordPress pejy Menu, misy “Dashboard” arahin'ny “vaovao farany”
Mey 10, 2013 amin'ny 8:26 am
misaotra, dia tahaka izany no niasa.
Mey 23, 2013 amin'ny 7:08 am
ho an'io asa io, raha mampiasa MULTI aho toerana?
Efa kitihina ny vaovao tamin'ny iray amin'ireo toerana fa tsy mampiseho ny tao amin'ny tambajotra Admin?
Mey 24, 2013 amin'ny 7:50 aho
Tsy maka fanahy izany, tokony hiasa.
Tranga ratsy indrindra, misintona ny plugin antontan-taratasy avy eto sy vaovao farany manually.
Jona 20, 2013 amin'ny 2:21 am
Hi fisaorana maro dia miasa amin'ny toerana maro 🙂
Mey 24, 2013 amin'ny 10:00 aho
Izany, Nahoana no ny fanavaozana fotsiny aho nanao, mamono ny saina eo amin'ny toerana voalohany?
Tsy azoko. Nahoana no tsy maintsy misintona ny plugin avy amin'ny taona izao, izay heverina fa hiasa avy amin'ny WordPress repository?
Coudl no mamaly hoe nahoana ianao no manery ny olona ho amin'izany?
Mey 26, 2013 amin'ny 12:10 aho
Tsara, Soso-kevitra aho namaky izany ary ny lahatsoratra teo aloha, Aho tsy nanery na iza na iza hanao na inona na inona, dia mety mametraka na inona na inona avy amin'ny toerana tianao ve tianao.
Jona 12, 2013 amin'ny 1:19 aho
Dia nanaraka ny tutorial, nefa mbola tsy mahita saina miakatra… Vonjeo! 🙁
Jona 12, 2013 amin'ny 1:57 aho
Tsy Maninona Ka – namaha izany fotsiny. Hay tsy maintsy mandeha miverina ho any amin'ny tena Widget sy mifidy ny saina safidy taorian'ny fanavaozana. Misaotra!
Novambra 22, 2016 amin'ny 11:07 aho
Misaotra ny olona, hoy ny nanampy ahy. Eny, rehefa avy fanavaozana, tsy maintsy hiverina any Dashboard>Bika Aman 'endrika>Widgets, dia ho hitanao ny safidy maro ny sainam-pirenena haneho.
fisaorana sy ny fitiavana avy any Soisa.
Jona 27, 2013 amin'ny 11:55 am
mandeha miverina ho any amin'ny tena Widget??? Fa izay?
Efa nametraka aho ny farany dikan-Transposh Plugin…9.3!
Dia nanaraka ny lahatsary fanampiana… fa tsy afaka mahita izay misy ny sainam-pirenena no safidy.
Te-hampiasa Flags fa, og lahatsoratra(anaran'ny Language).
Ahoana no ataoko eo ny saina toy ny Default ? Aiza ny marina safidy mba hametraka??
Misaotra in advace – Ciro
Jona 28, 2013 amin'ny 12:08 aho
Vaovao farany fotsiny ny Full Version.
Jona 28, 2013 amin'ny 2:26 am
No nanaovako izany! Fa ao amin'ny fanahafana pejy ny plugin tsy misy fomba rehetra mba hifidy ny saina fa tsy ny “Anglisy” – “Rosiana” sns (ny anaran 'ny fiteny).
Aiza ny bokotra ny mifidy saina?
I mampiasa wordpress3.5.1
Jona 28, 2013 amin'ny 10:21 am
Rehefa misafidy ny Widget mety hanova ny fomba, izany no tsy ao amin'ny plugin safidy fa amin'ny tarehy Widget manokana, amin'ny toerana iray ianao dia afaka manova ny anaram-boninahitra, sns.
Jona 28, 2013 amin'ny 10:50 am
Misaotra… izany tanteraka!
Tsy nahita selector amin'ny faritra Widget.
Aogositra 13, 2013 amin'ny 10:26 aho
Aho vao nohavaozina ny WordPress 3.6 ary ny interface tsara ny amin'ny efijery fandikan-teny dia niova tanteraka. Fa ny zavatra ratsy indrindra dia ny hoe tsy afaka toa mba hanitsiana izay lahatsoratry ny lahatsoratra izay efa nadika. Nataoko Transposh fanavaozam-baovao ho amin'ny farany, ary izaho koa Version nanao ny “Avelao upgrade ho tanteraka Malagasy” izay no miasa marina. Trarantitra ianao, aoka aho hahafantatra ny tokony hatao mba hahazoana ny amin'ny asa fandikan-teny efijery (miaraka amin'ny Orange sy maitso efajoro kely mba tsindrio eo :). Misaotra!
Aogositra 13, 2013 amin'ny 1:41 am
Aogositra 14, 2013 amin'ny 12:15 am
Salama, Dia nametraka ny plugin ary miasa tsara Transposh. Tonga ny olana rehefa mankany amin'ny lalan-tsarany ary tsindrio eo amin'ny sary mba hanitatra sy ny varavarankely izay miseho horonan-taratasy, ka dia isaky ny omeko ny sary manaraka dia nampihetsi-po bebe kokoa, tena hafahafa sy inelegant. Alohan'ny Transposh fametrahana sary hita ao amin'ny PopUp varavarankely fa tsy nifindra avy amin'ny efitra ny mifindra any amin'ny manaraka sary. Heveriko fa ho an'ny sasany tsy mifanaraka amin'ny WP ny plugin lightbox 2. Inona no afaka mamaha izany olana? Misaotra!
Aogositra 14, 2013 amin'ny 2:13 am
Tsy tena afaka manampy raha tsy manome URL izay ny olana dia hita
Aogositra 14, 2013 amin'ny 2:31 am
Ya está hita
Aogositra 14, 2013 amin'ny 2:34 am
Salama, Izany dia efa hita maso ny votoatin'ny ny Url. Misaotra.
Aogositra 14, 2013 amin'ny 2:12 am
Aho tsy afaka hijery ny Flag na dia efa fanavaozana ny Plugin ho any amin'ny farany Version. Afaka manampy ahy mba hanamboarana izany ..?
Aogositra 14, 2013 amin'ny 2:14 am
Ataovy azo antoka no nametraka ny araka ny tokony ho fomba Widget ao amin'ny fahitana / Widgets submenu
Aogositra 14, 2013 amin'ny 2:17 am
Misaotra mialoha ...
Mifidy izany.. Talohan'ny fanavaozana I dint nahita ny selector amin'ny Widget.. Misaotra Mpanoratra… Awesome Plugin… Misaotra betsaka
Aogositra 17, 2013 amin'ny 9:29 aho
Ny vohikala amin'izao fotoana izao amin'ny teny hebreo (tsara ho ankavia teny) ary te hanampy US teny anglisy ihany koa. Ny olana dia rehefa alaina ny tsipiriany ao amin'ny, ny fanaraha-maso rehetra takelaka WordPress nifindra avy teny hebreo ho amin'ny teny Anglisy, ary koa ny vohikala niova tarehy (ny tranonkala manontolo natao mifanaraka ho amin'ny ankavia). Dia raiki-tahotra sy kilemaina ny tsipiriany ao amin'ny. Vaovao aho amin'ny WordPress sy tamim-pahatsorana, Tsy tena azo antoka aho izay no manao izany aho dia manontany tena izay no safidy? Nahita Tutorials sasany izay nanampy ireo ny fiteny ankavia miankavanana rehetra ireo, ary na inona na inona nanjo azy…
Ampio aho azafady! 🙂
Misaotra betsaka mialoha,
Aogositra 17, 2013 amin'ny 11:09 aho
Inona no hitanao dia satria Transposh dia ny fanovana ny-toerana araka ny teny,
To manamboatra izany, azafady nametraka teny hebreo ho toy ny Default teny ao Transposh na rohin-drakitra tapaka ny fampidirana-toerana mampiavaka ao amin'ny toe-javatra,
Tsarovy ny Guide ny hitchhiker rakotra.
Paul Thomson milaza
Aogositra 19, 2013 amin'ny 2:55 am
Nahoana ianao no miala ao WordPress repository? Ve ianao mila Backlinks ny tranonkala, na izany tsy voatery / nandoa tombontsoa?
Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:59 am
Niala satria tsy afaka matoky azy intsony,
Tsy maintsy, Mbola tsy ilaina, hifidy-avy and. hifidy-in (na code izany)
Aogositra 20, 2013 amin'ny 10:31 aho
Miarahaba indray, Nanoratra aho andro vitsy lasa izay, nefa mbola tsy misy valiny. Mba Miangavy Re, na iza na iza hahafantatra ny fomba afaka nanamboatra ny tsy fifanarahan'ny izay miteraka ahy ny Transposh plugin ny WP Lightbox2? Rehefa manokatra ny sary Gallery manokatra varavarankely ary niaraka tamin'izay dia levona, tokony halehanao mba hahita izay hiafarany ny ny pejy. Izany no mitranga isaky ny mampahafantatra anareo aho hahita ny sary manaraka, Isaky ny horonan-taratasy teo. Inona no mety ho nitranga? Vaovao aho izao ka tsy afaka mieritreritra izay mety ho ny fahadisoana.
Mitranga izany ihany no nitondra ahy Transposh plugin ampiharina, rehefa vonoy ny sary mijery tsara.
Fanontaniana iray hafa izay manana dia ny lalan-tsarany tsy hita amin'ny teny Anglisy sy katalana.
Izaho no naka andro maromaro izany ka lasa adala aho. Mba Miangavy Re, olona manome ahy ny tanana?
Septambra 5, 2013 amin'ny 10:44 am
Voalohany, misaotra anareo noho ny asa lehibe nataonao hamorona plugin ity.
Manana fangatahana kely : ahoana no manampy amin'ny fanombohan'ny ny tongo-ny fehezanteny ao amin'ny voadika fiteny ?
Te hampitandrina ny mpamaky fa ny manaraka no lahatsoratra nadika by Google na Bing, na ….
Septambra 5, 2013 amin'ny 10:58 am
Jereo ny shortcodes (amin'ny http://trac.transposh.org) ary mampiasa ny not_in fehezan-dalàna, hahazoana antoka ianao no mandika teny amin'ny teny Default afaka.
Septambra 6, 2013 amin'ny 10:12 aho
wahou wahou ! Izany asa tena lehibe !
Oktobra 31, 2013 amin'ny 10:45 aho
Niezaka aho fanavaozana ho feno toy ny toromarika. Nefa tsy afaka mahazo ny vaovao, mba hampisehoana ny amin'ny rehetra. Efa kitihina “Avelao fampiakarana lenta ny Full Version” ary voavonjy, fa tsy misy vaovao farany showes ny. Manana ny 0.9.3 Version. Niezaka miditra sy mivoaka, niandry ny andro sy ny ora. Kitihina ny sy eny sy ny sisa. Tsy misy vaovao farany. Tiako ny saina miasa! Koa ny fandikan-teny miasa intsony dia toa…
Oktobra 31, 2013 amin'ny 11:05 aho
Misy olana eo amin'ny WordPress 3.7, vokatry ny fiovam-ny fanavaozana Url izay tsy mahatonga ny dingana vaovao,
Misy roa vahaolana:
1. ny dikan- 0.9.4 dia ho afaka ny wordpress.org izay hahafahan'ny indray ny fanavaozana
2. manually misintona ny rakitra avy eto ka hanao ny fanavaozana
Oktobra 31, 2013 amin'ny 11:07 aho
ok. Misaotra! Nihevitra aho adala na smt! 😉
Any hevitra rehefa?
Oktobra 31, 2013 amin'ny 11:08 aho
Faran'izay haingana (tokony hanao ezaka ny sasany fitsapana alohan'ny ny famotsorana)
Oktobra 31, 2013 amin'ny 11:10 aho
Ok. Cool. Ary ny fisaorana noho ny asa rehetra momba izany! Manampy be dia be mba ho mora kokoa ho ahy ny hamoaka sy ny olon-kafa ny mahatakatra!
Desambra 10, 2013 amin'ny 10:06 aho
Aho ela hanao ny upgrade izany dikan satria nieritreritra aho aho hamaha ny saina, na tsy afaka mifidy kokoa fiteny… Tena adala aho! Toy ny ankamaroan'ny mpampiasa Plugins, Mino aho fa te-hahazo zavatra fotsiny maimaim-poana ary miasa mandrakariva. I te-congrats transposh ho ny asa lehibe sy ny fanaovana ahy intsony, ary mieritreritra ny fomba ny hanome azy io indray indray andro any.
Desambra 12, 2013 amin'ny 6:39 am
Misaotra noho ny hatsaram-panahy teny